တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ငွိမျးခမျြးရေးပူးပေါငျးရံပုံငှေ အဖှဲ့ (JPF) ဥက်ကဋ်ဌ၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဖငျလနျနိုငျငံသံအမတျကွီးအား လကျခံတှဆေုံ့ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
ဖဖေျောဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၂၀ ဇှနျ ၁၊ ၂၀၂၀
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ငွိမျးခမျြးရေး ပူးပေါငျးရံပုံ ငှအေဖှဲ့ (Joint Peace Fund -JPF) ဥက်ကဋ်ဌဖွဈသူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဖငျလနျ နိုငျငံသံအမတျကွီး H.E.Mrs. Riika Laatu ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး အောငျလငျးဒှေးနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဖငျလနျနိုငျငံသံအမတျကွီးနှငျ့အတူ ငွိမျးခမျြးရေးပူးပေါငျးရံပုံငှအေဖှဲ့(JPF) ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ဆှဈဇာလနျ နိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Timenderlin နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ ငွိမျးခမျြးရေးပူးပေါငျးရံပုံငှအေဖှဲ့(JPF)အဖှဲ့မှ မွနျမာနိုငျငံ၏ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျ မြားအတှကျ လိုအပျသောရံပုံငှမြေား ပံ့ပိုးကူညီပေးလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ ကမ်ဘာ့နိုငျငံပေါငျးစုံ၌ ဖကျဒရယျစနဈကို ကငျြ့သုံးလကျြရှိရာတှငျ မညျသညျ့နိုငျငံမဆို မိမိတို့နိုငျငံနှငျ့ ကိုကျညီသညျ့ ဖကျဒရယျ စနဈမြိုးကိုသာ ကငျြ့သုံးလကျြရှိပွီး မွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့လညျး နိုငျငံ၏သမိုငျးကွောငျး၊ ပကတိအခွအေနေ မြားနှငျ့ ကိုကျညီသညျ့ ဖကျဒရယျစနဈကိုသာကငျြ့သုံးသငျ့သညျ့ အခွအေနမြေား၊ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေး ရရှိရနျအတှကျ တပျမတျောမှ တဈဖကျသတျပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲခွငျးမြားအပါအဝငျ စိတျရှညျသညျးခံ စှာဖွငျ့ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ တဈနိုငျငံလုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျ အကောငျအထညျဖျောမှုဆိုငျရာ ညှိနှိုငျး အစညျးအဝေး(JICM) အပါအဝငျ ငွိမျးခမျြးရေး ဆှေးနှေးပှဲမြား အမွနျဆုံးကငျြးပပွုလုပျနိုငျရေး ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ လှတျလပျသော စုံစမျးစဈဆေးရေး ကျောမရှငျ (ICOE) အစီရငျခံစာ ထုတျပွနျမှုအပျေါ တပျမတျောအနဖွေငျ့ ယငျးအစီရငျခံ စာမထှကျ ပျေါမီကပငျလိုအပျသော စုံစမျးစဈဆေးမှုမြားဆောငျရှကျခဲ့သညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ ဥပဒနှေငျ့ အညီ ဆကျလကျဆောငျရှကျသှားမညျ့အခွအေနမြေားအား ဆှေးနှေးခဲ့ ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဖငျလနျနိုငျငံ သံအမတျကွီး တို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျပေးအပျကွပွီး တကျရောကျလာကွ သူမြားနှငျ့ အတူ အမှတျတရစုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ – ၁၉
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ငြိမ်းချမ်းရေး ပူးပေါင်းရံပုံ ငွေအဖွဲ့ (Joint Peace Fund -JPF) ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန် နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mrs. Riika Laatu ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်လင်းဒွေးနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ ငြိမ်းချမ်းရေးပူးပေါင်းရံပုံငွေအဖွဲ့(JPF) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Timenderlin နှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးပူးပေါင်းရံပုံငွေအဖွဲ့(JPF)အဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် များအတွက် လိုအပ်သောရံပုံငွေများ ပံ့ပိုးကူညီပေးလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းစုံ၌ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးလျက်ရှိရာတွင် မည်သည့်နိုင်ငံမဆို မိမိတို့နိုင်ငံနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဖက်ဒရယ် စနစ်မျိုးကိုသာ ကျင့်သုံးလျက်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံ၏သမိုင်းကြောင်း၊ ပကတိအခြေအနေ များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုသာကျင့်သုံးသင့်သည့် အခြေအနေများ၊ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်အတွက် တပ်မတော်မှ တစ်ဖက်သတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲခြင်းများအပါအဝင် စိတ်ရှည်သည်းခံ စွာဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး(JICM) အပါအဝင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ အမြန်ဆုံးကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် (ICOE) အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်မှုအပေါ် တပ်မတော်အနေဖြင့် ယင်းအစီရင်ခံ စာမထွက် ပေါ်မီကပင်လိုအပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အခြေအနေများနှင့် ဥပဒေနှင့် အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည့်အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဖင်လန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး တို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြပြီး တက်ရောက်လာကြ သူများနှင့် အတူ အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။